The Hotest Trends SEO In 2017: Insight From Semalt
Tamin'ny taona 2017, nipoitra ny tetikasa fanatsarana ny fikarohana vaovao. Izany fiovana manaraka izanyny fanambarana ny fepetra algorithm vaovao novolavolain'ny Google. Ny fitsipika dia manome lanja bebe kokoa amin'ny seho SEO toy ny kalitao anatiny aryny maha-zava-dehibe azy ary ny fandraisana an-tànana ny namana - petnet solutions north wales pa police. Mandritra izany fotoana izany, ny tetika taloha toy ny teny filamatra fototra dia heverina ho satroka maintyfitaovana, izay miteraka sazy.
Nik Chaykovskiy, manam-pahaizana momba ny Semalt Digital Services dia manome hevitra sasany momba ny SEO, izay mety hahatonga ny tranonkalanao haingana amin'ity taona ity.
1. Eritrereto ny tanjona mitohy amin'ny finday
Asehon'ny Google amin'ny tranonkala mahafinaritra. Tao anatin'izay roa taona lasa izay,Ny finday dia nanolo-tsindrona tsimok'aretina teo amin'ny sehatry ny aterineto. Hatramin'ny 2015, Google dia nanambara ireo tranonkala finday manerantanydia mety ho fepetra ho an'ny Google hananganana vohikala. Ankoatr'izay, tranonkala tsy manana finday amin'ny serasera dia mandraysazy ho an'ny ambany. Google dia nazava ihany koa fa hiparitaka tsy ho ela ny tranonkala finday sy birao. FaIty antony ity, ny olona manorina tranokala dia tokony hampandeha azy ireo amin'ny finday, hanatsara ny fitadiavana finday ary hampitombo ny fahatsapanailay tranonkala. Ny tranonkala finday dia hahatonga ireo tranonkala ho ambony.
2. Mitandrema ireo tranonkala marobe mba haka ireo pejy finday voafaritra (AMP)
Hatramin'ny 2015, ny AMP dia ny fironana amin'ny fanatsarana ny pejy Internetho an'ny navigateur finday. Hatramin'ny làlam-pifandraisana ankafizin'ny finday, ny AMP dia iray amin'ireo fomba ahazoana antoka fa ny tranonkala dia manana UEO..Ny AMP dia mameno avo dimy heny haingana ary amin'ny fotoana iray ihany, dia miaro ny fampiasana angon-drakitra hatramin'ny avo efatra heny ny habaka nentim-paharazana.
3. Ny fahamendrehan'ny fanatontosana fanandraman'ny mpampiasa (UEO) dia hitombo
Google dia manoro hevitra amin'ny mpividy amin'ny aterineto sy ny tranonkala mpamorona tranonkala mba hanamafisana bebe kokoaamin'ny tranokalan'ny kalitao. Google dia miankina amin'ny toe-javatra tahaka ny fahatsorana, ny fampiasana mora foana, ny navigativa ary ny fahazoana miditra. Toerana iray tokony hanomeny mpampiasa dia manana traikefa tsara mba hametrahana voalohany amin'ny milina fikarohana.
4. Ny Fikarohana Voice Dia Amin'ny Aloka
Ny fikarohana ny feo dia manangona ho iray amin'ny fomba fitadiavana fikarohana.Ny software tahaka an'i Siri, Cortana ary Google Now dia mampiasa baiko amin'ny feo mba hametrahana fangatahana fikarohana ao anaty motera. Tokony handroso ireo mpandrindra webao anatin'ity sehatra vaovao ity indrindra indrindra amin'ny fiakaran'ny fitaovana mampiasa ny aterineto toy ny fahitalavitra smart.
5. Ny Content amin'izao fotoana izao dia fikarohana lalindalina mifantoka
Ny SEO dia mikendry ny fikarohana teny fohy. Na izany aza, Google dia mitady mpikaroka amin'ny sehatra.Google dia hamaritra votoaty izay manana fahalianana goavana eo amin'ny mpanatrika. Ireo mari-pamantarana toy ny taham-pifanampiana, fotoana sy pejy nizaranadia ho ny sasantsasany amin'ireo singa izay mamaritra ambony kokoa amin'ny pejy Google an'ny valin'ny fikarohana (SERPs).
Amin'ny maha-dokam-barotra nomerika azy, tokony hijanona ho mailo hatrany ary vonona ny hitazona hatrany nyfanovana. Amin'ity taona ity, maro ny fanitsiana nataon'ireo fitaovam-pikarohana maro. Avy amin'ny fiovan'ny AMP ho an'ny SEO finday. Ireo fiovana ireodia nahatonga fironana maro hanovana ny fomba fanao nentim-paharazana nentim-paharazana. Aorian'ny torohevitra voalaza etsy ambony, dia mety ho vonona amin'nyfanovana izay vokariny amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny milina fikarohana.